Warshadaha iyo soo -saareyaasha Makiinadaha Furaha ee Shiinaha & SJJ
Alaabada dhiirrigelinta raaxada leh. In ka badan 40 nooc oo ah furaha maqaar Fob qaabka & 80 qaababka keychain maqaar ayaa dooran kara, wax caaryo ah ma leh. Astaantu waxay noqon kartaa leysarka biraha ama daabacaadda, laser, debossed on the maqaar.
Faraha Furaha Maqaarka / Keychains -ka Hargaha
Waxaan leenahay in ka badan 40 qaabab furaha maqaar Fob qaabka uu dooran karo. Ha haysan lacag caaryaal ah. Waxaad ku dari kartaa 1pc soo jiidashada biraha oo astaantaadu ku taal. FOB -ga maqaarku wuxuu u samayn karaa saldhigga booliiska. Ku dar astaanta saldhigga booliiska ee la siiyay booliiska. Oo waxaan leenahay in ka badan 80 qaabab keychain maqaar oo aad dooran karto. Logo wuxuu ku shubi karaa birta, wuxuu ku daabici karaa maqaarka. Laser on maqaar. Astaanta Debossed ee maqaarka. Isku dar biraha iyo haragga, waxay u muuqdaan kuwo aad u sarreeya. Baabuur badan oo kor u qaadida astaanta. Keychain maqaarku waa shay dhiirrigelin raaxo leh.
Waxyaabaha: Maqaarka dhabta ah / PU
Qaab: Lacag goyn qaab lacag la'aan ah oo loogu talagalay qaababka iyo cabbirrada jira
Waxyaabaha: Naxaas, naxaas, bir, aluminium, birta aan lahayn, birta zinc, pewter
Habka Logo: Dhimasho ayaa ku dhufatay, sawir gacmeed leh, daabacan, shubid dhinta, shubid miiqan
Midabka: dhaldhalaalka adag, ku dayashada dhaldhalaalka adag, dhaldhalaalka jilicsan
Qaabka cabbirka & naqshadeynta: La habeeyay
Hore: Dadka haysta Cabitaanka Neoprene
Xiga: Qalabka birta
Keychains -ka Maqaarka ee ugu Fiican Shiinaha
Shiinaha Alaab -qeybiyeyaasha Keydka Keydka ugu Fiican
Keychain Maqaarka Shiinaha iyo PU Keychain qiimaha
haystaha kaarka ganacsiga haragga
Faraha Furaha Maqaarka
Keychains -ka Hargaha
sumadda boorsada haragga
Faraha Furaha Maqaarka leh Astaamaha Birta
Logo Brand Logo Keychains
Neoprene Chapstick Holp Keychains